I KDE inendlela entsha yokubonisa iifestile ezivuliweyo zilungile | Ubunlog
Ndingumsebenzisi owonwabileyo KDEKodwa kukho ezinye izinto abanokuphucula kuzo. Ngaphandle koko abayi kuhlala becinga ngento abanokuyenza kunye nokongeza utshintsho. Ngokoluvo lwam, apho unokuphucula khona into kuyilo, kuba ilula kakhulu kwaye ujonge ukubuza GNOME 40 kunye nezinye izijekulo, nangona kuyinyani ukuba abayonxalenye yomfanekiso, ungalawula isantya sopopayi.
Yintoni eyinxalenye yoyilo lwe-GNOME yindlela iifestile eziboniswa ngayo, kwaye kule ngxaki ukungahambi kakuhle kubukeka ngakumbi kunodolo. Ngeso sizathu, iprojekthi ye KDE isebenza kwifayile ye inguqulelo entsha ye «Present Windows», onayo ngasekunene ekubambeni kwentloko. Nate graham ikhankanywa Ijongeka ngathi ikwi-macOS, kwaye intle. Umntu akayeki ukucinga ukuba kwixa elizayo siya kuba nakho ukufikelela kuyo ngepaneli yokuchukumisa, kodwa ngenxa yoko kuya kufuneka benze umtsi baye eWayland. Obu buhle buza kufika kwiPlasma 5.23.
Njengemisebenzi emitsha, kule veki kuphela yangaphambili ehambele phambili kwaye enye eya kusivumela ukuba sikhethe imeko yeadaptha yeBluetooth xa siqala iseshoni: ukucima, ukucima okanye ukukhumbula imeko eyayikuyo ixesha lokugqibela lenkqubo iqala ngokutsha (Nate IGraham, iPlasma 5.23).
1 Ukulungiswa kwamaphutha kunye nokuphuculwa kokusebenza
3 Konke oku kuza kufika nini kwi KDE desktop
Umboniso uthatha ii-skrini kwakhona kwisisombululo esichanekileyo kwiseshoni yePlasma Wayland usebenzisa umlinganiso weqhezu elinje nge-125% (iMéven Car, Spectacle 21.08.1).
Ukuhlengahlengiswa kulungiswe ngendlela amaqhosha okuhombisa kwimixholo yomoya opholileyo aboniswe kwiifestile zebar yentloko ye-GTK (Emilio Cobos Álvarez, Plasma 5.22.5).
Inkqubo yokubeka esweni ayisabonisi ulwazi lweedilesi ze-IPv4 xa i-IPv6 ikhubaziwe (UDavid Edmundson, iPlasma 5.22.5).
Ukukopa isicatshulwa kwizaziso usebenzisa nayiphi na into esebenzayo ngoku (UDavid Redondo, IPlasma 5.23).
Ukucofa okuphakathi ukuze uncamathisele ngoku kuyasebenza phakathi kwendalo yeWayland kunye nezicelo zeXWayland (UDavid Redondo, iPlasma 5.23).
Isikali esisekwe kwi-DPI sisebenza kwakhona (UDavid Edmundson, iPlasma 5.23).
Isikhombisi ngoku sibonisa ulwazi oluphilayo malunga nee icon xa kusungulwa usetyenziso (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.23).
Ukulungiswa enye yeendlela zokukhiya isikrini (David Edmundson, iPlasma 5.23).
Iifestile ezivelelayo zee-Comboboxes kwizicelo zeQtQuick ngoku zibonisa ngokuchanekileyo kwiilwimi ze-RTL (uNate Graham, iiNkqubo-sikhokelo 5.86).
Ngoku unokukopa isicatshulwa sePlasma ngesinqumli sekhibhodi Ctrl + C (UDavid Redondo, iPlasma 5.23).
Ukurhuqa iiwindows ngoku kubaphelela emaphethelweni ezinye windows ezikwi-desktop efanayo (iVlad Zahorodnii, iPlasma 5.23).
Ngoku ungatshintsha useto lwencwadana yemigaqo yokunxibelelana ngetambo ye-Ethernet kumaxabiso ngakumbi (UDavid Hummel, iPlasma 5.23).
Iapplet yeMenyu yeHlabathi ngoku ijongeka ngakumbi njengemenyu (Jan Blackquill, IPlasma 5.23).
Isidlali semithombo yeendaba ngoku sihlala sibonisa ubugcisa bealbhamu kunye nemvelaphi yayo engacacanga ngaxeshanye, nokuba ubugcisa bealbham bufundwa kwindawo ecothayo (Fushan Wen, IPlasma 5.23).
Ukulayisha i-spinner kudityanisiwe kwiPlasma, kwizicelo ze-KDE nakwisikrini sasekhaya, kwaye ngoku kujongeka ngathi kukujikeleza (iBjörn Feber, iPlasma 5.23 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.86).
Izithunzi zepopups, iincoko zababini, ii-OSDs kunye nezaziso zePlasma zenziwe zalungelelana, zibukeka zithandeka kwaye ziyahambelana ngakumbi nezithunzi zesicelo windows (UNiccolò Venerandi, iiNkqubo-sikhokelo 5.86).
IPlasma 5.22.5 iya kufika ngo-Agasti 31 kwaye ngoSeptemba 2 siya kuba nakho ukusebenzisa i-KDE Gear 21.08.1. Okwangoku akukho mhla uthile we KDE Gear 21.12, kodwa baya kufika ngoDisemba. Izakhelo ze-KDE 5.86 ziya kufika ngo-Septemba 11, kunye nePlasma 5.23 iya kuhlala nomxholo omtsha, phakathi kwezinye izinto, ngo-Okthobha u-12.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE inendlela entsha yokubonisa iifestile ezivuliweyo kunye nolunye uphuculo kwi-Wayland, phakathi kwabanye.